Sun, May 27, 2018 | 19:28:19 NST
प्रश्नः म कोरिया आएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो। यहाँ आएको आठ महिनामा कम्पनी परिवर्तन गरें। कम्पनी परिवर्तन गरेको तीन महिना नबित्दै दुर्घटनामा परेर मैले हातको चार वटा औंला गुमाएँ। अहिले म दुर्घटना भएको कम्पनीमा नै काम गर्दैछु। पोहोर छुट्टीमा घर गएर पनि फर्कें। मलाई यो कम्पनीले फेरि बोलाउँछ कि बोलाउँदैन्? अनि म सिबिटी परीक्षा दिएर कोरिया आउन पाउँछु कि पाउँदिन ?
उत्तरः बेनामे साथी, चार वर्ष १० महिना कोरियाको एउटै कम्पनीमा काम गरेर फर्केकाहरुले प्रतिबद्ध कामदारका रुपमा पुनः त्यै कम्पनीमा काम गर्न जान पाउँछन। उनीहरुले सिबिटी परीक्षा दिनु पर्दैन्। तर तपाईंले कम्पनी परिवर्तन गरिसकेकाले प्रतिबद्ध कामदारका रुपमा कोरिया जान पाउनु हुन्न। यो वर्ष अर्थात सन् २०१७ मा एचआरडी कोरियाले सिबिटी परीक्षा नलिने भएको छ। एचआरडीले अर्को वर्ष सिबिटी परीक्षा खुल्ला गरे त्यस परीक्षामा सामेल हुन सक्नुहुन्छ।